बुलबुल नेपाल | ४ वर्ष पूरा भएको कोट !
सोमबार ०९, असार २०७६ २१:२७
४ वर्ष पूरा भएको कोट !
निखील आचार्य । मेरो फेसबुकमा भएका अधिकांश फोटोमा यहि कोट देखिन्छ । प्रोफाइल पिक्चरमा नै पर्न सफल भएको छ । यस कोटसँग मेरा सुख र दुःखका क्षणहरुमा मसंगै रहेको अनुभव छ ।
मेरा क्याम्पस पढ्ने दिनमा यो कोट मसंगै कलेज जान्थ्यो । म भ्रमण जादा मसँगै हुन्थ्यो । भूकम्पपछि २०७३ सालमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणले इन्जिनियरिंगका अन्तिम सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई फिल्ड पठाउदा १ महिना यो कोट मैसँग थियो ।
पोहोरसाल माग्नेबुडालाई भेट्न जाँदा पनि यहि कोट लगाएर गएको थिएँ। धनगढी प्रिमियर लिग, लिटल फ्लावर लिग, फारवेश्ट पशुपति गोल्डकप अनि खप्तड गोल्डकप हेर्न जाँदा पनि प्रायः यहि कोट लगाउने गरेको छु ।
२०७४ सालमा बीबीसी मिडिया एक्सनको कार्यलय जाँदा पनि मसँगै यहि कोट थियो । यस बर्ष प्रदेश प्रमुखको आथित्यतामा भएको एक कार्यक्रमको उद्घोषक म हुँदा यो कोट पनि सँगै थियो । अस्ति तिहारपछि बर्दिया गएँ, डोटी गएँ र साथमा यहि कोट थियो । अफिसका काममा पनि धेरैपटक यहि कोट मसँग हुन्छ ।
घरमा पनि छोरासँग खेल्दा यहि कोट लगाउछु । पोहोरसाल माग्नेबुडालाई भेट्न जाँदा पनि यहि कोट लगाएर गएको थिएँ। धनगढी प्रिमियर लिग, लिटल फ्लावर लिग, फारवेश्ट पशुपति गोल्डकप अनि खप्तड गोल्डकप हेर्न जाँदा पनि प्रायः यहि कोट लगाउने गरेको छु ।
मेरो कोट, आज ४ बर्षको भयो । यसलाई एक हिउँद, कलेज पढ्नेबेला १४ सय पैसा तिरेर आफ्नो बनाएको थिएँ । अहिले पनि मसँगै छ । अरु कोट नभएका होइनन् तर अरु कुनै छोटो हुन्छन् त कुनै साना ।
भिनाजुसँग कर्णालीको लामो पुल घुम्न जाँदा, सुटिङका लागि टिकापुरको पार्क, घोडाघोडी ताल, गोदावरीधाम, महाकालीको झोलुङ्गे र छेउको राष्ट्रिय निकुञ्जका हात्ती हेर्दा पनि म सँगै यहि कोट थियो । अस्ति एक दिन बेहडाबाबा मन्दिर गयौं । त्यसपछि शिवपुरी धाम र जाखोर ताल जादा पनि यहि कोट मसँग थियो ।
मेरो कोट, आज ४ बर्षको भयो । यसलाई एक हिउँद, कलेज पढ्नेबेला १४ सय पैसा तिरेर आफ्नो बनाएको थिएँ । अहिले पनि मसँगै छ । अरु कोट नभएका होइनन् तर अरु कुनै छोटो हुन्छन् त कुनै साना । नयाँ कोट किन्छु भनेर सोचेको ६ महिना भैसक्यो, कोटै नकिनेको त झन ४ बर्ष पुगिसके छ । अब त पक्का नयाँ कोट किन्छु भन्ने सोच छ !
शनिबार, ०५ माघ २०७५ मा प्रकाशित
Tags : #Nikhil acharya #Dhangadhi-Kailali
‘श्रीमतीको मन सयमा नभई हजारमा भेटियो’
‘आफ्नो ईलाकामा त कुकुर पनि भुक्छ’
के साच्चिँकै देशमा गणतन्त्र आयो? (कविता)
दिनेश पाठकको गजल
‘रेखा हेरेर भविष्य थाहा पाउने, हात कसले बनायो?’ (गजल)
दिनेशको गज्जब गजल